-VIAS, okungukuthi, ithusi kuhlinzwa izimbobo, ukudlala indima ebalulekile interconnection phakathi izingqimba e isiliphu wesifunda ibhodi. Ngokuvamile nekukhuluma,-VIAS e-PCB kungenziwa labizwa zigaba ezilandelayo: ngokusebenzisa-imbobo nge, izimpumputhe nge angcwaba nge. Blind /-VIAS wangcwatshwa kabanzi isicelo SMT (Surface Mount Technology) nje ukuze sivale lapho sisilela nemibi ngokusebenzisa-imbobo VIAS.
Blind nge uxhuma eyodwa ungqimba yangaphandle futhi eyodwa noma ngaphezulu izingqimba engaphakathi ephrintiwe wesifunda ibhodi, obhekene interconnection phakathi ungqimba phezulu futhi izingqimba kwangaphakathi noma ungqimba phansi futhi izingqimba kwangaphakathi.
-VIAS Buried ukuxhuma izingqimba kwangaphakathi kuphela ngaphakathi ephrintiwe wesifunda ibhodi ukuze awabonakali nje ngokubonakala olungaphandle PCB ngoba ngaphakathi "wangcwatshwa".
Blind /-VIAS wangcwatshwa nefomethi ngcono kwabantu amabhodi ngaphandle kwesidingo ukwandisa isibalo izingqimba noma usayizi ebhodini. Ngakho-ke, izimpumputhe /-VIAS wangcwatshwa ngokuvamile isicelo PCB HDI. Beka ngenye indlela, izimpumputhe /-VIAS wangcwatshwa kungenziwa wacosha uma uhlushwa imfuneko Friend yendawo elinganiselwe futhi ngokusebenzisa-imbobo kalula.
Ngenxa yokuhlangenwe nakho kwethu eminyakeni engaphezu kwengu-20 'kule mboni, PCB Wonderful ngokukhethekile yokukhiqiza PCB ne izimpumputhe /-VIAS angcwatshwe. Bobabili onjiniyela kanye nokukhiqiza imishini kusuka PCB Wonderful ukuqinisekisa amakhono ethu ngokugcwele ekuhlangabezaneni nezidingo izimpumputhe / wangcwatshwa ngobuchwepheshe.
Kuze kube manje, thina uku uyakwazi ukuhlinzeka athutha yamba futhi laser yamba izixazululo. Uma kuziwa imishini mechanical, nge ububanzi amabanga kusuka 0.2mm ukuba 0.4mm ngenkathi 0.1mm I-laser imishini.
Ngokusekelwe izidingo kwephrojekthi, ungakhetha okuhambisanayo sokuprakthiza diameters e izinto ngenkathi ithola ikhotheshini osheshayo PCB. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana izimpumputhe /-VIAS wangcwatshwa, sikhona njalo kuyatholakala at wonderful@wonderfulpcb.com .